Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo ku biiray wafuud aadday magaalada Gaza. – Radio Daljir
Nofeembar 22, 2012 12:59 g 0
Gaza, Nov 22 ? Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u kicitimay magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin, halkaasi oo todobaadadii ugu dambeeyey ay ka oognaayeen xiisado dagaal oo culus.
Mudanayaashaan oo qayb ka ahaa wafuud maanta gaaray Gaza, ayaa halkaasi ku tagay magaca baarlamaanka waddamada Islaamka ah iyo kuwa Jaamacadda Carabta, kuwaasi oo dawladda Soomaaliya ay xubin ka tahay, una diray wafti ballaaran Gaza.
Xubnahaan ka mid ah wakiillada Soomaaliya ee ku biiray wafuudda caalamiga ah ee ku sii qulqulaya magaalada madaafiicdu ku socoto ee Gaza, ayaa ka ambabaxay magaalada Qaahira ee waddanka Masar oo ah dalka ku hawllan dhax-dhaxaadinta Israa?iil iyo Falastiin.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sh. Ismaaciil ?Jawaari? oo maanta shir jaraa?id oo uu Muqdisho ku qabtay uga hadlay safarka xildhibaannada, ayaa sheegay in uu salka ku hayo dadaallada lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dhiigga badan u daatay ee ka socota Gaza.
Mudane Jawaari, waxaa uu sheegay Soomaaliya in ay xubno ka tahay ururka waddamada Islaamka iyo midka Jaamacadda Carabta, ayna hormuud u yihiin hannaanka lagu jooginayo xabbadda socota, taasna ay keentay Soomaaliya in lagu daro dalalka wafuudoodu ka degayaan Falastiin, ayna tahay waajib saaran dawladda Soomaaliyeed, xildhibaannaduna ay gaas gudanayaan.
Xaaladda magaalada Gaza ayaa wali kacsan, waxaana lagu hawllan yahay qorshe lagu baadi-goobayo in xal loo helo xaaladda murugsan ee dhax taagan Israa?iil iyo Falastiin, taasoo ay ku dhinteen dad ku dhaw 200 oo qof, una badan shacab reer Falastiin ah.